Wasiirkii Khayraadka iyo Batroolka Nigeria oo London lagu Xiray |
Wasiirkii Khayraadka iyo Batroolka Nigeria oo London lagu Xiray
Dowladda Igiriiska gaar ahaan Hay’adda u qaabilsan Dambi baarista ayaa Shaacisay in lagu qabtay meelo kala duwan oo dalkaas ku yaalla 5 ruux oo lagu Tumhayo Musuq-maasuq iyo lagaco raadkooda la saantiray kuwas oo looga Shakiyay Dadka u xiran Arrintaan.
Hay’addu waxay sheegtay in dadka la xiray ay isugu jireen 3 rag ah iyo 2 dumar ah oo da’doodu u dhaxayso 60 sano iyo 30 sano.
Alison-Madueke waxay ahayd wasiiraddii khayraadka Batroolka ee Nigeria muddo 5 sano ah, xilligii uu jiray maamulka Madaxweynihii hore, Goodluck Jonathan taas oo hadda loo haysto musuq-maasuq iyo qiyaamo qaran.
Madaxweynaha iminka talada dalka Nigeria haya waxa uu sheegay in Xukuumaddiisu ay dhawaan billaabi doonto in ay dacwad ku soo oogto kuwo uu ku sheegay inay mas’uul ka yihiin Qiyaamada Hantida dalkiisa.
Dhawaan ayaa Madaxweynaha Nigeria Muhammadu Buhaari wuxuu daboolka ka Qaaday in xukuumaddiisu ay billowday baaritaanno ay ku samaynayso ganacsiga Saliidda, si ay dib ugu soo ceshato wax uu ku tilmaamay malaayiin laga xaday Dowladdiisa.
Alison-Madueke waxay beenisay in ay wax khalad ah samaysay markii uu guddoomiyihii hore ee Baanka dhexe ee Nigeria Sanusi Lamido ku adkaystay in ilaa 20 Bilyan oo doollar oo ah lacag ka soo xarootay saliidda Waddankaas aan meelna lagu xisaabin xilligii ay madaxda ahayd haweenaydaan.